Kuyini ukumaketha kwe-Pay-Per-Click? Izibalo ezibalulekile ezifakiwe! | Martech Zone
Kuyini ukumaketha kwe-Pay-Per-Click? Izibalo ezibalulekile ezifakiwe!
NgoMsombuluko, Juni 3, 2019 NgoMsombuluko, Juni 3, 2019 Douglas Karr
Umbuzo engisabuzwa ngawo ngabaninimabhizinisi asebekhulile ngukuthi ngabe kufanele yini bakwenze ukumaketha kokukhokha ngakunye (PPC) noma cha. Akuwona umbuzo olula yebo noma cha. I-PPC inikeza ithuba elimangazayo lokucindezela izikhangiso phambi kwezithameli kusesho, kwezenhlalo nakumawebhusayithi ongahle ungafinyeleli kuwo ngezindlela zemvelo.
Kuyini ukumaketha kwe-Pay Per Click?
I-PPC yindlela yokukhangisa online lapho umkhangisi akhokha khona imali isikhathi ngasinye lapho kuchofozwa isikhangiso sabo. Ngoba idinga umsebenzisi ukuthi athathe isinyathelo, le ndlela yokukhangisa ithandwa kakhulu. Abathengisi bangathola amathuba e-PPC kuzo zonke izinjini zokusesha, imithombo yezokuxhumana kanye nenqwaba yamanethiwekhi wokukhangisa. Ngokungafani nezikhangiso zendabuko ezikhokhiswa i-CPM (kubiza okuvelayo okuyinkulungwane), ama-PPC akhokha nge-CPC (izindleko ngokuchofoza ngakunye). Izinga le-CTR (isilinganiso sokuchofoza) liyiphesenti lokuthi abasebenzisi bachofoza kangaki ukuqhathanisa nesikhangiso se-PPC.
Kufanele uyenze i-PPC? Yebo, ngincoma ukuba nesisekelo umtapo wokuqukethwe futhi iwebhusayithi ngazo zonke izinsimbi namakhwela ngaphambi kokuqala ukusebenzisa ithani lemali ezikhangisweni. Okuhlukile, kunjalo, uma ungaqiniseki ukuthi yikuphi okuqukethwe okuzokhiqiza ukuguqulwa. Ukuhlanganiswa kwegama elingukhiye nekhophi yesikhangiso ku-PPC kungakongela ithani lemali nesikhathi osichithe ekuthengiseni okuqukethwe uma ungaqinisekile.
Imvamisa ngeluleka amaklayenti ukuthi athole isiza sokuqala, umtapo wolwazi wokuqukethwe, amakhasi amahle wokufika, nohlelo lwe-imeyili… bese usebenzisa i-PPC ukukhulisa isu lakho lokumaketha ledijithali jikelele. Ngokuhamba kwesikhathi, ungakha imikhondo yakho ephilayo futhi usebenzise i-PPC kancane lapho udinga ukuholwa.
Lokhu infographic kusuka I-SERPwatch.io, Isimo Sokukhokha Ngakunye 2019, Inikeza ithani lemininingwane maqondana nomkhakha we-PPC, ukuthi izingxenye zisebenza kanjani, futhi ifaka intaba yamaqiniso ahlobene.
Izibalo ze-PPC ezisemqoka zango-2019
Ngonyaka odlule, Ukusetshenziswa kwesikhangiso sosesho lwe-Google kukhule ngo-23%, ukusetshenziswa kwezikhangiso zokuthenga kukhule ngama-32%, kanti ukusetshenziswa kwemali yesikhangiso ngombhalo kukhule ngo-15%.
Emhlabeni I-45% yamabhizinisi amancane batshala imali ngamandla ku-PPC ukukhulisa ukusebenza kwabo.
Ngokuya ngocwaningo lweGoogle, izikhangiso zokucinga zingakwazi ukukhulisa ukuqwashisa komkhiqizo ngo-80%.
Izikhangiso ezixhasiwe zifinyelela ku- Ukuchofoza okungu-2 koku-3 ekhasini lokuqala le-Google.
Imikhankaso yokubonisa yeGoogle ifinyelela ngaphezu kwe- Ama-90% wabasebenzisi be-Intanethi emhlabeni jikelele.
Ngokumangazayo, Ama-65% awo wonke amakhasimende chofoza kusixhumanisi somkhiqizo othile.
Imiphumela yosesho ekhokhelwe iphumela kokulingene kwe- Izikhathi eziyi-1.5 amazinga wokuguqulwa yemiphumela yokusesha yemvelo.
Ngo 2017, Amadivayisi eselula kukhiqizwe i-55% yokuchofoza kwesikhangiso sosesho lweGoogle.
U-70% wabaseshi beselula ushayela ibhizinisi ngqo kusuka ku-Google Search.
The isilinganiso sokuchofoza okujwayelekile kumanethiwekhi okusesha ngu-3.17%. I-CTR emaphakathi ye imiphumela ekhokhelwe kakhulu ingu-8%!
Qiniseka ukuthi ubheka yonke i-infographic engezansi ukuthola ezinye izibalo ezingaphezu kwezingu-80!
Tags: izindleko ngokuchofoza ngakunyectrzikhangiswa kanjani izikhangiso ze-ppcukusesha okukhokhelweukukhangisa okukhokhelwayo komphakathiukhokha ngokuchofoza ngokukodwappcukumaketha kwe-ppciwashi